မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: Common Top-Level Domains
31 Mar 08, 08:56နတ်ပျိုမလေး: http:// က ဘာကိုပြောတာလည်း ပြီးတော့ www ဆိုတာ သိတယ် httpကိုမသိဘူး...အဲဒီ အကြောင်းလေးရောထည့်ရေးပြပါလား..ပြီးတော့ .com ဆိုတာသိတယ် .net (mean) ကိုမသိဘူး..မမ ရှင်းပြနိုင်မလား။အဲဒါ နတ်ပျိုမလေးက ဆီဗုံးမှာ မေးသွားတာဗျဆရာကြီးလုပ်တာတော့ ဟုတ်ပါဘူး။ သိသလောက်လေး ပြန်ဖြေပေးတာပါ။http:// တို့ FTP:// တို့ https:// တို့ဆိုပြီးတော့ website addressတွေမှာ တွေ့တွေ့နေရတာပါ။client side နဲ့ browser တွေကြားလှမ်းချိတ်ပေးတဲ့ Transfer Protocolတွေလို့တော့ သိထားပါတယ်။အသေးစိတ် ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ သွားဖတ်ကြည့်ပါနော်။ (ဂဃနဏ သေချာရှင်းမပြတတ်လို့ အချောင်ခိုတာ အဟိဟိ) (A series of commands that defineshow information is formatted, retrieved, and delivered. Usually usedin reference to information transferred ...Hypertext transfer protocol (HTTP), A protocol commonly used to accessresources on the Internet.File Transfer Protocol (FTP),astandard Internet protocol, is thesimplest way to exchange files between computers on the Internet. )http://www.mnhs.org/preserve/records/electronicrecords/erglossary.html.com တို့ .net တို့ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ ပထမဆုံးပြောချင်တာက ခု ကျမတင်တင်နေတဲ့ ပို့စ်တွေက .Net technology ဆိုတာက သတ်သတ်ပါ။ နတ်ပျိုမလေးမေးတာတွေကတော့ internet address တွေမှာပါတာတွေပါ။ ပြောမယ်ဆိုရင်အင်တာနက်လိပ်စာကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဒါ ဘာ site အမျိုးအစားလဲ၊ဘယ်နိုင်ငံမှာ တင်ထားတာလဲ ဆိုတာသိနိုင်အောင် လေ့လာထားသင့်တဲ့ CommonTop-Level Domains တွေပါ။.com ဆိုရင် Commercial entity.edu Educational entity.gov U.S Government.mil U.S Military.net Network provider.org Nonprofit organization.au Australia.ca Canada.ch Switzerland.cn China.de Germany.dk Denmark.es Spain.fi Finland.fr France.ie Ireland.in India.it Italy.jp Japan.kr Korea.mx Mexico.my Malaysia.nl Netherlands.no Norway.nz New Zealand.se Sweden.sg Singapore.tw Taiwan.uk United Kingdom.us United States.za South Africa.mm Myanmarအထက်ပါအတိုင်း ခွဲခြား နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေသိ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့.com တွေ .net တွေကတော့ သေချာပေါက် commercial ပါ network providerတွေလို့ ပြောလို့ မရတော့ပါဘူးတဲ့။ ယေဘုယျ သုံးသလိုတောင် ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ကဲ..ဒီလောက်ဆို နတ်ပျိုမလေး ကျေနပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ညီမရေ။နည်းပညာနှင့် ပါတ်သက်သော ပို့စ်များအတွက် အမှားအယွင်း ယူဆချက်တင်ပြချက်များရှိရင် ထောက်ပြ ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။ကျမသိသလောက်လေး ကျမဘလော့ကို လာဖတ်တဲ့ မောင်နှမတွေ မြန်မာလို အလွယ်တကူနားလည်သိရှိ လေ့လာနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားထားတာမလို့ နည်းပညာဘိုးအေကြီးများမှ နားလည်ခွင့်လွှတ်လက်တွဲကူညီညွှန်ကြား နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါရစေ။